ITokyo, idolobha lezithombe ezinkulu | Izindaba Zokuhamba
ITokyo, idolobha lezithombe ezinkulu
UMariela Carril | | Japan, Tokyo, Ukuhamba kwe-Asia
Lapho uhlela ukuvakashela edolobheni, umuntu angenza izinhlu ezimbili: uhlu lwezindawo eziheha izivakashi kanye nohlu lwe izivakashi umfokazi. Uhambo lwami oluhle ngukuhlanganisa zombili izinhla, ngale ndlela ukuvakasha kuba okwakho uqobo futhi awugcini ngokubona okwenziwa ngumuntu wonke.
Tokyo, inhlokodolobha yaseJapan, idolobha elikhulu. Abanye bakuchaza njengedolobha elikhulu kunedolobha: kunezindawo ezivulekile nezindlela ezingenagama lapho umuntu, owezizwe, angalahleka khona. Kubukeka sengathi idolobha liyasixosha ezindaweni zalo eziyimfihlo kakhulu, kubumfihlo baso, kepha ngeke siyeke. Nalu uhlu lwe izithombe ezinkulu kakhulu nezithandwa kakhulu eTokyo, zasendulo nezanamuhla, okuthi ngezinye izikhathi futhi naphezu kobukhulu bazo akutholakali kalula emigwaqweni yenhloko-dolobha yaseJapane.
3 UBuddha waseKamakura
4 UHachiko, inja ethembekile
Leli igama le-creepy kakhulu futhi elikhulu isithombe esenziwe ngesicabucabu ehlobisa indawo ezungeze iMori Art Museum. Yaqoshwa nguLouise Bourgeois ngo-1999 futhi wenziwa ngo insimbi, ithusi nemabula. Kuzo esinye sezithombe ezibunjiwe ezinkulu emhlabeniIngaphezu kwamamitha angamashumi amathathu ubude, futhi ibukeka njengokuthile okuvela kumovie yesayensi.
ULouise Joséphine Bourgeois wayengumdwebi waseFrance-waseMelika owashona ngo-2010 eneminyaka engama-99. Wayaziwa njengo- Isicabucabu owesifazane ngalezi zibazi ezaqala ukugcwala ubuciko bakhe ngeminyaka yama-90s. Isicabucabu, esihloko sithi Maman (maman ungumama, ngesiFulentshi), yavela okokuqala eLondon, kwiTate Modern, futhi kamuva kwenziwa ezinye. Enye yazo yileso esisibona eTokyo.
Isifanekiso inamaqanda angama-26 emabula ngaphakathi kwesifuba sethusi ne imele amandla kamama womculi, owalungisa izindwangu namateyiphu eParis, owaphotha njengesicabucabu, futhi owashona eneminyaka engu-21. ILa Maman de Tokio iyesabisa futhi ihambisana noTokio ngoba kuleli dolobha, kusuka eGozdilla nezilo zalo, izidalwa ezingaphansi zilingana kahle kakhulu.
Uma uthanda i Amahlaya aseJapan nopopayi (manga ne-anime, ngesiJapane), bese uya eTokyo, awukwazi ukuphuthelwa yiGondam enkulu. Gundam kungumsebenzi wenganekwane yesayensi, yempi, elandisa ukungqubuzana phakathi kwezinhlangothi ezahlukene ezisebenzisa ukulwa kwazo amarobhothi amakhulu. Uma kukhona okuthile amaJapane akuthandayo, yilawa marobhothi futhi uGundam uchungechunge oludala kakhulu. Amarobhothi abizwa ngokuthi amaSoft Suits kanti uchungechunge lokuqala luqala ngasekupheleni kweminyaka yama-70 kepha kukhona ukulandelana okuningana.
Hay iGundam enkulu esiqhingini sokuzenzela sase-Odaiba, eTokyo Bay. Namuhla lesi siqhingi siyindawo edumile yokuthenga nokuzijabulisa, kepha esikhathini esedlule bekukhona izinqaba nezinye izindlela zokuzivikela ekuhlaselweni kwamanye amazwe nemikhumbi yaseMelika eyayifuna ukuphoqa ukuvulwa kweJapane ukuhwebelana namanye amazwe (ngekhulu le-XNUMX). Kamuva amaJapan ahlanganisa lezi ziqhingi ezincane zaba iziqhingi ezinkulu futhi umhlaba wagcwaliswa, waguqula indawo yaba yindawo yasemadolobheni yesikhathi esizayo.
Isifanekiso se-Mobile Suit Gundam ingaphezu kwamamitha angama-20 ubude, isakhiwo, futhi senziwa nge Isikali esingu-1: 1. Ime phambi kwenxanxathela yezitolo i-Diver City Tokyo futhi iyinhliziyo yokuheha okubizwa ngeGundam Front Tokyo esebenza esitezi sesithupha senxanxathela yezitolo futhi ifaka i-360º theatre, umbukiso wamanye amamodeli we-Gundams nemidwebo, imidwebo nokunye izinto zochungechunge.
Lesi yisithombe futhi esikhulu kakhulu, esinye sezithombe zethusi ezinkulu kunazo zonke emhlabeni. I-Kamakura ingenye yezinto okufanele zibonwe kusuka eTokyo. Kuseningizimu nedolobha, isikhathi esingaphezudlwana kwehora ngesitimela sezinhlamvu. Kunamathempeli amaningi anamagugu amasiko, kepha ngaphandle kokungabaza isithombe esikhulu sikaBuddha siyamangalisa. Wenziwe ngethusi futhi ekuqaleni wawumbozwe ngeqabunga legolide., noma kungekho okusele kulokho kugeza kwegolide futhi kubonakala kuphela ezungeze izindlebe.
UBuddha waseKamakura zangonyaka ka-1252 futhi inokuncane okungaphezu kwe- Ukuphakama okungamamitha ayi-13. Awunalutho ngaphakathi nangasekupheleni kwekhulu le-XNUMX, ngenkathi abaseYurophu bephinda bethola iMelika, i-tsunami yageza ithempeli elalizungeze lamboza lesi sithombe futhi isinqumo kwakungekhona ukusakha futhi nokushiya lesi sithombe sisebusweni. Bekulokhu kunjalo kusukela lapho.
UHachiko, inja ethembekile
Kunama-movie amabili akhuluma ngale nja ethandekayo, inkanyezi yaseJapan neyaseMelika elingisa uRichard Gere. Kokubili kuyajabulisa. Hachiko kwakuyinja yangempela kodwa namuhla kunomlando kuphela futhi isithombe sokuthi kuseShibuya Station. Xoxa indaba ukuthi UHachiko walinda ngokwethembeka umnikazi wayo iminyaka eyisishiyagalolunye. UHidesaburo Ueno wayengusolwazi owayesebenza e-University of Tokyo kanti inja yakhe i-Akita yayijwayele ukumlinda lapho kuphuma isitimela.
Ngelinye ilanga usolwazi washona esemsebenzini, ngo-1925, wangabe esabuya. UHachiko waqhubeka nokumlinda, usuku nosuku, unyaka nonyaka, iminyaka eyisishiyagalolunye isiyonke, waze washona ngo-1935, emgwaqweni, ebheke esiteshini. Ukwethembeka kwenja kwavusa uzwela futhi kwaba isithonjana se-japan. Isifanekiso sokuqala sikaHachiko sakhuliswa ngo-1934, yebo, ngaphambi kokuba kufe inja, kodwa kumele ukuthi saphonswa ngesikhathi seWWII lapho izinsimbi zazidingeka embonini yempi.
Lapho impi iphela, iziphathimandla zaseTokyo zanikeza indodana yombazi wokuqala ukwakhiwa kwesinye isithombe, futhi yiso lesi sithombe ubelokhu esiteshini kusukela ngo-1948, eHachiko Exit ngokunembile. Namuhla i- indawo yomhlangano ethandwa kakhulu Phakathi kwamaTokyoites futhi azishodi izivakashi eziza ukuzothatha izithombe. Ngaphezu kwalokho, njalo ngo-Ephreli 8 kunomcimbi omncane wokukhumbula inja ethembekile. Futhi uma sicabanga ngakho, udumo lwakhe lweqa imingcele futhi lwakhanga imboni yaseHollywood.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuhamba kwe-Asia » Japan » ITokyo, idolobha lezithombe ezinkulu
Iminyuziyamu evelele kunazo zonke engaphansi kwamanzi emhlabeni